Sea Haven - Executive 2BR Sea View Apartment w/ pool, yokupaka, gym, jacuzzi. ITower ide ine-KFC, iPizza Hut, iBaskin Robbins, iKrispy Kreme, i-Subway, iKhemesti kunye neSupermarket. - I-Airbnb
Sea Haven - Executive 2BR Sea View Apartment w/ pool, yokupaka, gym, jacuzzi. ITower ide ine-KFC, iPizza Hut, iBaskin Robbins, iKrispy Kreme, i-Subway, iKhemesti kunye neSupermarket.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJerin
Indawo ekhethekileyo ye-2 ye-BR enombono ogcweleyo wolwandle obekwe kwenye yezona zakhiwo zide kwaye zigqwesileyo kwi-Ajman Corniche Residence ngaselwandle. Imizuzu nje embalwa yokuhamba umgama ukuya elunxwemeni, iiklabhu, iindawo zokutyela, iikhefi, imivalo kunye neevenkile. Umbono omangalisayo wolwandle ogcweleyo ukusuka kwigumbi elipheleleyo kunye ne-balcony. Indawo ilungele zonke iintlobo zokuzonwabisa emini nasebusuku. Iihotele ezininzi zodidi olukufutshane. Ifanelekile kwiintsapho ezi-2 okanye izibini ezi-2 okanye usapho olunye olunabantwana.
Eli gumbi libanzi libonelela ngamagumbi amabini amakhulu okulala, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela. Ifulethi lixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi. Igumbi lokulala elikhulu libonelela ngebhedi enkulu yenkosi enombono othandekayo ukuya elwandle kwaye inegumbi lokuhlambela elahlukileyo elinebhafu eyahlukileyo kunye nekhabhathi yeshawari eyahlukileyo. Igumbi lokulala le-2 linebhedi enkulukazi kwaye inombono othandekayo ngaselwandle. Ngasegumbini lokutyela, unetafile enkulu enezitulo zokonwabela izidlo zakho. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izinto zasekhitshini ezifunekayo ekuphekeni nasekuphakeni. Omnye umba weli khitshi kukuba unayo itafile encinci yokutya kunye nezitulo ezijonge ukutshona kwelanga kunye nolwandle. Igumbi lokuhlala lineTV ehlakaniphile eqhagamshelwe kwi-Wi-Fi apho unokuqhagamshelwa kwizinto ozithandayo. Isofa enkulu ekhululekileyo incoma ukubukela iimuvi kwi-smart TV. Ude ufumane indawo yakho yokupaka egciniweyo kunye nekhuselekileyo ngeSea Haven.
Ezona ncomo sizifumene kundwendwe lwethu lwaseSea Haven malunga nokuqaqamba kokutshona kwelanga okukhanya kuwo onke amagumbi. Unokufikelela kwibalcony ukuze ubambe le multicolor - ukutshona kwelanga okuhlala kukhazimla isibhakabhaka ngombala otyheli-orenji-obomvu, ngelixa ulele kwifanitshala yangaphandle enikezelweyo kwaye uneesnacks ozithandayo kunye neziselo.
Ndiqinisekile, ubuya kuba elona xesha lilungileyo eSea Haven.
Ndiphantse ndaphoswa ukwabelana ngale nto, ukuba ungumntu ofana nam, othanda ukophula ukutya, ke goodnews bantu! Olu luhlu lude, ngoko bambelela!
-	Indlela engaphantsi
Kwaye ukuba uyathanda ukufumana igrosari, akuyomfuneko ukuba uye kude. Ukutya kunye neevenkile ezinkulu zonke zibekwe emazantsi esi sakhiwo. Ukuba uphose iyeza elivela kwilizwe lakho, ungakhathazeki, nokuba iikhemesti ezivunyiweyo ze-UAE ziphantsi kwesakhiwo (Nceda uze nencwadi kagqirha wakho).
Ukuhlala eSea Haven kukufumana ukufikelela ebantwaneni nakwiqula lokuqubha labantu abadala kunye nonogada abasemsebenzini, ijimu*, isauna*, jacuzzi*, igumbi lomphunga*. Ezo ziphawulwe ngeenkwenkwezi zinokufikelela okwahlukileyo kumadoda nabasetyhini.
Ndijonge phambili ekwamkeleni eSea Haven.
Umbuki zindwendwe ngu- Jerin
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ajman